काठमाडौं : के तपाईं सेयर बजारलाई अलि फरक कोणबाट हेर्न चाहनु हुन्छ ? बजारका सामान्य र आधारभूत ज्ञान त छ तर अब यतिले मात्र पुगेन भनेर अझै बृहत्तर र गहिराईमा पुगेर अध्ययन गर्ने रहर लागिरहेको हुन सक्छ । सेयर बजारलाई वृहत्तर रुपमा हेर्दा अर्थतन्त्र, राजनीति, लगानीकर्ताको मनोविज्ञानबीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ अनि यसले कसरी प्रभाव पर्छ ? सरकारको नीति, प्रविधि, समग्र अर्थतन्त्रको चक्र, बाह्य तथा अन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिको प्रभाव सेयर बजारमा कहिले, कतिबेला र कसरी पर्छ ?
यी र यस्तै विविधि पक्षमा जानकारी गराउन नेपाली पैसाले अब सुरु गर्दैछ, सेयर बजारको एड्भान्स तालिम । यसअघिका नियमित र आधारभूत भन्दा अलि फरक, अलि व्यापक अनि विस्तृत विषयमा यो तालिम केन्द्रित हुनेछ । सेयर बजारका आधारभूत ज्ञान हासिल गरिसकेकाहरुलाई यस तालिम मार्फत अझै गहनरुपमा जानकारी लिन सहयोग पुग्नेछ । लगानी सम्बन्धी स्मार्ट निर्णय लिनका लागि तालिममा महत्वपूर्ण टिप्सहरु दिइनेछ ।
लगानी गर्दा म्याक्रो इकोनमी, इन्डस्ट्री एनालिसिस तथा नीतिगत विषयको प्रभाव एवं आगामी सम्भावनाका बारेमा कसरी दख्खल हुने भनेर पनि सिकाइने छ । तालिम प्रयोगात्मक विषयमा केन्द्रित हुनेछ । विभिन्न केस स्टडीहरुका बारेमा पनि जानकारी गराइनेछ । निचोडमा भन्नुपर्दा लगानी गर्ने र बाहिरिने सम्बन्धमा सटिक निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास गराउनु नै तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
यस तालिमका प्रशिक्षक विनित खड्का रहेका छन् । तालिम यही फागुन १२ गते सोमबारदेखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । ४ दिने यो तालिम प्रत्येक दिन साँझ ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म नेपाली पैसाको कार्यालय पानीपोखरीमा सञ्चालन हुनेछ । थप जानकारीका लागि ४४१०४८८ वा ९८०१११३१२४ मा फोन गर्नुहोस् ।
आफ्नो नाम दर्ता गर्न र कोर्षका बारेमा थाहा पाउन यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।